Zimbabwe Yotatarika Kupedza Bumbiro reMutemo
Chikumi 21, 2012
Rwendo rwemutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, rwange rwuchitarisirwa Svondo rinouya rwunenge rwombosendekwa parutivi sezvo management komiti yeCOPAC yange iri mumusangano wakakosha kunyanga wekuyedza kupedza chikamu chekutanga kana kuti "draft constitution", yatadza kupedza basa iri nenguva.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti management komiti yakatenderana panyaya yekuendesa mamwe masimba kumatunhu kana kuti "devolution" uye nyaya ye"citizenship" zvainge zvorambwa neZanu-PF.
Asi zvinonzi nyaya dzichiri kunetsa inyaya yemasimba emuchuchusi wehurumende uye masimba emauto. Asi zvinonzi nyaya idzi hadzina kupetwa sezvo vamwe mumanagement komiti vainge voti vane zvimwe zvavari kuda kuita.
Chikwata chenhumwa dzaVaZuma pamwe nedzimwe nhumwa dzakanzi neSADC dzibatsire JOMIC dziri kutarisirwa munyika svondo rinouya neMuvhuro. Misangano yenhumwa idzi yakanangana nekukura nzira yekuti vazuma vazouye munyika.
Gurukota rezvemabasa eparamende nebumbiro remutemo, VaEric Matinenga vanoti vamborova ndima yakakura.